5 Calaamadood oo Lagu Kala Saaro Xiriirka Saaxiibtinimo Iyo Midka Jacayl (Muuqaal – Beegsonews-Wararka maanta
Home XOGAHA DUNIDA 5 Calaamadood oo Lagu Kala Saaro Xiriirka Saaxiibtinimo Iyo Midka Jacayl (Muuqaal
5 Calaamadood oo Lagu Kala Saaro Xiriirka Saaxiibtinimo Iyo Midka Jacayl (Muuqaal
Qofina kaligii ma loonaal karo, aadanuhu dabeecad ahaan waa noloole bulshaawi ah, xiriirka jacaylka waxaa loo aqoonsan yahay inuu ka mid yahay xiriirrada ugu adag ee aan si sahlan lagu fahmi karin oo su’aaluhu ay aad ugu badan yihiin, dad badan ayaa is weydiiya xiriirkan aan wadno ma mid saaxiibtinimaa mise wuu ka ballaaran yahay oo waa mid jacayl, halkaas ayaa waxaa ka bilaabaneysa silsilado su’aalo aan dhammaad lahayn.
Websiteka wikiHow, ayaa waxa uu soo bandhigay calaamado ku tusinaya in xiriirka uu yahay mid jacayl uuna dhaafsiisan yahay mid saaxiibtinimo.
1- U Fiirso habka uu kuula hadlayo
Luuqadda jirka waxbadan ayaa laga ogaadaa xaqiiqada dhabta ah ee dareenka uu qofi kuu hayo, waxaa ugu muhiimsan codka, marka hore waxa ay kuula muuqaneysaa inaaney jirin wax muhiim ah ama daneyn ah, laakiin codkiisa ayaa ku tusinaya sida uu uga taxadarayo erayada uu kuu isticmaalayo iyo dadaalka uu ku bixinayo xulashada erayda habka uu kuula hadlayo.
2- Ku baraarug mowduucyada uu xulanayo ee uu kaala hadlayo
Marka uu doonayo inuu kula hadlo mowduucyada uu xulanayo ayaa ka tarjumaya dareenka uu kuu hayo, inuu marwalba uu ku dhibo waxey tilmaan ka tahay inuu rabo inaad jecleysato.
3- Si wanaagsan u dhageyso marka uu ka waramayo gabdhaha kale
Waxaad ka ogaaneysaa inuu doonayo taladaada ama uu raboo inuu kaa maseyrsiiyo adiguna aad tahay gabadha kaliya ee maskaxiida iyo qalbigiisa mashquulisay, marka uu xilliyo is xigxiga uu ku weydiiyo ra’yiga aad gabar goonni ah ka qabto, xilligaas waxa uu kaa doonayaa inaad kalsooni geliso oo uu kugu soo dhiirado, isagoo kuugu soo gambanaya maadama aad saaxiibbo tihiin, waxna aydaan kala qarsan.
4- Sida uu kuula dhaqmayo si gaar ah u eeg
Qofka khajilaadda badan dareenkiisa waxaa si cad lagu fahmi karaan marka aad internetka kala sheekaysanayso ama erayada uu adeegsanayo marka aad taleefoonka iskula hadleysaan, faham oo si gaar ah ula soco habka uu kuula soo xiriirayo si goonni ah ula soco codkiisa iyo dareenkiisa.
5- Si gaar ah u eeg ficillada uu adiga dartaa u sameynayo
Ma ku aragtay ficillillo kuu muujinaya inuu yahay saaxiib wanaagsan, haddii jawaabtu ay haa tahay, ogow waxaa dhici karta inuu doonayo inuu kugu soo jiito oo uu qalbigaaga ku guuleysto.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo socdaal shaqo ku tegay Addis Abeba
Next articleNin Gabadh kufsadey oo Dil lagu xukumey